April 2014 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
Wifi Password သိချင်လား &#8230; ?
ဒီ APK လေးက Android ကိုင်ဆောင်သူ
တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ APK နာမည်က WIBR+
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ APK လေးကိုအသုံးပြုဖို့
Root ရှီနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နဲနဲလောက်ရှင်းပြမယ်ဗျာ …
APK အသုံးပြုနည်းလေးကို …
၁။ Download လုပ်ပြီးရင် ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Add Network ကိုနှိပ်ပါ။
၂။ မိမိ အသုံးပြုလိုသည့်
Wifi ကို ၁ ချက် Click ပါ။
၃။ Box တစ်ခုကြလာပါလိမ့်မည်။
ထို Box မှ
BruterforceSmall DictionaryMiddle DictionaryBig Dictionaryများကို On ပါ …
ပြီးရင် Add to Queue ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ ခဏစောင့်ပါ အဝိုင်းလေး
လည်ပြီး Password စတင်ရှာဖွေနေပါလိမ့်မယ်။
အဝိုင်းလေးလည်တာ ရပ်ပီး လက်မတောင်ရင်တော့ အင်တာနက်စတင်အသုံးပြု
သွားပါပြီခဗျာ…
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ပါ ခင်ဗျာ..
အပ်ဒိတ်မှ ကြိုက်သော ကိုကို မမ များအတွက် ကိုဖေ့စ်ဘုတ်က april 16 က v.10.0.0.0.4 ထွက်လာပြန်ပြီဗျာ...Test version လေးဆိုပေမယ့် ကျနော် မနေ့က စပြီးသုံးနေတာ Error ကင်းပါတယ်...အလိုရှိသူများ အဆင်ပြေသော လင့် က ဒေါင်းယူကြပါခင်ဗျာ...
မြန်မာများအတွက်ဖေ့စ်ဘုတ် အခမဲ့ဖွင့်ပေးမည်စာမျက်နှာမှ ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျာ
မြန်မာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံး Matching App လေးဖြစ်ပါသည်။ Japan နှင့် မြန်မာ ပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားသော App ပါ။
WeMatch ဆိုတာ အထီးကျန်ဖြစ်နေသူ၊ ဘ၀လက်တွဲဖော် လိုအပ်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အသင့်တော် ဆုံး အဖော်မွန်၊ သူငယ်ချင်းများ ရှာဖွေပေးတဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.။
Facebook နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ၀ါသနာ၊စရိုက်၊အကြိုက်နဲ့ တစ်ထပ်တည်း ကျမယ့် မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်း၊ဘ၀လက်တွဲ ဖော် ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။
Application အသွင်သာ မကပဲ သာမန် Facebook အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လည်း Browser မှ လွယ်လင့်တကူချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဆိုက်တွေကို ထည့်သွင်းပြီးတော့ ဖတ်လိုသူများအတွက် Rss Reader လေးပါခင်ဗျာ
Android phone ကနေ သတင်းတွေ ဖတ်တဲ့ Applicationတွေကို လူတိုင်းနီးပါး ဖုန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းဖူးမှာပါ ဒါတွေက သူများလုပ်ထားတာဆိုတော့ ကိုယ်မကြိုက်တာလဲပါ ကြိုက်တာလဲပါ ကိုယ်ကြိုက်တာလဲမပါနဲ့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ကျေနပ်မူ့ မရဘူးဆိုရင်
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ၀တ်ဆိုဒ်တွေကို ဒီဆော့ဝဲလ်ထဲ ထည့်သွင်းပြီး အသစ်တင်သမျှဖတ်လို့ရပါတယ်
ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ ၀တ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ လိပ်စာကို တစ်ကြိမ်ထည့်သွင်းထားရုံပါပဲ www. အပါအ၀င်အပြည့်အစုံထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်
အချိန်မှတ်ပြီးAuto ဖုန်းခေါ်ခိုင်းမယ့် Call Schedule v3.3.6
- ကဲ…ဒီတစ်ခါတင်ပေးလိုက်တဲ့ apk ကတော့
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ "ဖုန်း" ဆက်ဖို့
"ချစ်ရေ…ကိုယ်မနက်ဖြန်ည ၈ နာရီတိတိမှာ
သွားပြီ ပြဿနာတက်ပြီ ကြေကွဲပြီ
မပူနဲ့ မစိုးရိမ်နဲ့ အဲဒါတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်
တဲ့ application လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်ဗျာ။
ဒီ apk လေးက ဘယ်သူ့ဆီကို ဘယ်နှခုနှစ်
ဘယ်လ ဘယ်နှနာရီ ဘယ်နှမိနစ် ဘယ်အချိန်
စတာတွေကို သတ်မှတ် timmer ပေးထားပြီး
အဲဒိအချိန်ရောက်ရင် သူ့ဟာသူ Auto
သူဘက်ကဖုန်းမချမချင်း ဘေလ် တွေတက်
ဟဲ ဟဲ ဒါလည်းမပူပါနဲ့ဗျာ။
ကိုယ့်ဖုန်းလေးကို auto speaker ဖွင့်ပေးထား
လိုက်ပေါ့ဗျာ။ဒါဆို တဖက်က ပြန်ထူးနေတဲ့
ကဲ …လေကြောသိပ်ရှည်နေလို့ မေတ္တာတွေ
ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးဖို့ Auto Call Recoder apk
file size 168 KB ပဲရှိပြီး version 2.0 နှင့်
★Call Schedule v3.3.6 Apk အားဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် လင့်ခ်★
★Auto Call Recoder v3.68 Apk အား
မိမိဆီဖုန်းလာတဲ့အခါ စက္ကန့် ၃၀ ကြာသည်ထိ မကိုင်ပါက အလိုလို answer လုပ်ပေးပြီး တစ်ဘက်မှပြောစကားများကို recording လုပ်ပေးထားပါလိမ့်မယ်…
Notication bar မှာလည်း ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်က လာတယ်၊ ဘယ်ဖိုင်မှာသိမ်းထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါမယ်…
အဲဒီဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး တစ်ဘက်ကမှာထားသမျှပြန်ဖွင့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်…
APK ၂ခု install လုပ်ရပါမယ်။ CallRecorder.apk နဲ့ AnswerCall.apk ဖြစ်ပါတယ်…
CallRecorder.apk က အခြားသူရေးထားတဲ့ APK ဖြစ်ပါတယ်…
အားသားချက်ကတော့ MPT ကို Voice mail အသုံးပြုခလစဉ်ကြေးပေးစရာမလိုပါ…
အားနည်းချက်ကတော့ ဖုန်းလာတာကိုမသိလိုက်ဘဲ စက္ကန့် ၃၀ ကြာတဲ့အခါ အလိုလိုဖြေကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိဒီဘက်မှာ (မသိဘဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့) ပြောဆိုနေမိသမျှ တစ်ဘက်ဖုန်းခေါ်သူကကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
Google Nexus5Tool One Click Root ,One Click Bootloader
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ROOT Softwares, ကွန်ပြူတာ Software, ဖုန်းနည်းပညာများ
One Click Root . .
One Click Bootloader . .
အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ် မြန်ဆန်တယ် . . ဆိုင်သမားတွေ အတွက်တော့ အန်ကိုက်ပဲ
Posted by Phyo Zin Linn အောက်ကလင့်မှာဒါင်းသွားလိုက်ကြပါ
မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် MP-3 သီချင်းလေးတွေကို Apk လေးလုပ်ပြီးတော့ နားထောင်ချင်သူများအတွက်ပါ
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: knowledge For Android apk, ကွန်ပြူတာ Software
ဒီ Software လေးက မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် MP-3 သီချင်းလေးတွေကို Apk လေးလုပ်ပြီးတော့ နားထောင်ချင်သူများအတွက်ပါ လုပ်နည်းလဲ ဘာမှမခက်ပါဘူး ကွန်ပျူတာတော့ရှိရမယ်နော်...
Software ကိုဖွင့်ပြီးတော့ add musics ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီးတော့ သီချင်းတွေထည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအရင်Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ပုံလေးထည့်ရမည့်နေရာကို Click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ ပုံထည့်လိုက်ပါ ပုံလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Build ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ပြီရင် ကျလာတဲ့ စာမျက်နှာမှာ Application icon အတွက် ဓာတ်ပုံကိုရွေးပါ Background စိတ်ကြိုက်ရွေးပါ
ပြီးရင် Next ဆိုတာလေးကို ဆက်နှိပ်ပါ Create Key store ကိုပြောင်းပေးလိုက် Next ကိုနှိပ်ပါ Location ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးပါ နာမည်ရွေးပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ Next ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ ကျလာတဲ့စာမျက်နှာမှာ Music Name စိတ်ကြိုက်ရွေးပါ ပြီးရင် Nextကိုနှိပ်ပါ Finished ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ထွက်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ. app လေးက Documents ထဲမှာ appmk Folder >>AndroidMusicAppMaker Folder>>Applications Folder ထဲမှာရှိတတ်ပါတယ် လုပ်ပြီးတော့ အရှာရခက်နေမှာစိုးလို့ပါခင်ဗျ...
ဒါဆိုရင်တော့ အိုကေသွားပါပြီ.. လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ apk လေးရှိမယ့်နေရာကို သွားယူပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ Install လုပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါပြီခညာ..
Ref : www.maungpauk.org
Huawei Y516 (Y516-T00, Android 4.2, V100R001CHSC01B021, China Mobile)
Download Huawei Y516-T00 Firmware Android 4.2
Galaxy S SL (GT-I9003) အတွက် Android 2.3.5 firmware version (Thailand) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်။Firmware Version Info (PDA: CSC: MODEM: CHANGELIST: 669569 BUILD DATE: 28.10.2011)
Device Name - Galaxy S SL
Region - THL (Thailand)
Version - I9003DXKP9
OS Version - 2.3.5
Build Date - 28.10.2011
Changelist - 669569
ကွန်ပျူတာရဲ့ Local Disk (C:) (D:)စသည်တွေမှာ မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံလေးထည့်နည်း
ကျတော်ကတော့ဝင်းဒိုးမှာပါတဲ့ paint လေးနဲ့ဖန်တီးပြပါမယ်
window key+R တွဲနိပ်ပါ mspaint လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအန်းတားခေါက်လိုက်ပါ
paint ထဲကိုကိုယ်အိုင်ကွန်းချိန်းချင်တဲ့ပုံလေး drag စွဲထည့်လိုက်ပါ
file >save as>bmp picture ကိုရွေးပေးပါ
file name မှာ icon.ico လို့နာမ်မည်ပေးပါ(.ico ပါကိုပါရပါမယ်)
ပြီးရင် desktop ပေါ်မှာsace ထားလိုက်ပါဦး
window key +R >type regedit and press enter
registry editor ကျလာရင်
Hkey local Machine >Software>microsoft>Windows>CurrentVersion>exporer ကိုသွားပါ
explorerပေါ်မှာ right clickထောက် nes>key ကိုကလစ်ပါ
DriveIcons ပေါ်မှာ right clickထောက် new>key ထပ်ယူပါ name မှာ D လို့ပေးပါ
အဲ့Dပေါ်မှာ right click>new>key ထပ်ခေါ်ပါ defauleicon လို့နာမ်မည်ပေးပ
ညာဘက်မှာ (Default)ဆိုတာလေးမှာ doubleပေးလိုက်ပါValue Dataမှာ ခုနကဖိုင်ရဲ့location ကိုပေးလိုက်ပါ
eg:C:\_Users\_Taung Paw Thar Lay\_Desktop\_8b7029fe870e2f289556672aa3d809af1168872d7dbaa627d49dbeadfa17baf3.ico
my computer ကိုဖွင့် f5လေးနှစ်ချက်လောက်နိပ်လိုက်ရင် ပုံလေးပြောင်းသွားပါပြီ
IT Learner and sharer (ရပ်စောက်သား)
Computer ကsleep မဟုတ်ပဲလုံးဝပိတ်သွားတာမျိုးလား…..
Computer က၅မိနစ်လောက်ကြာတာနဲ့ auto ပိတ်သွားတယ် sleep ဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ
Sleep ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဗျာ အပေါ်ကပြောခဲ့သလို၅မိနစ်ပြည့်တာနဲ့ screen ကပိတ်သွားတယ်
ဒါပေမဲ့ ကီးဘုတ်ကကီးတစ်ခုခု နိပ်တာနဲ့ပြန်ပွင့်လာတယ် အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဝူးးဂျ
Power ကိုပြန်ဖွင့်မှရတယ် အခုက လုံးဝပိတ်သွားချင်တာမဟုတ်ပါဘူး sleep ဖြစ်ချင်တာပါ
လို့တဘောထားပေးပါခင်ည ခိခိ ဒီပိုစ်ကအဲ့ကိစ္စလေးဖြေရှင်းဖို့ပါအရင်ဆုံး
window key+R နိပ်ပီး run box ခေါ်ပါControl desktop လို့ရိုက်ပီးအန်းတားခေါက်ပါ Screen Saver
ကိုဆက်ဝင်ပါ On,Resum,Display logon screen ရဲ့ဘယ်ဘက်ကအမှန်ချစ်လေးတက်ပေးပါ
၃မိနစ်ဆို3 ထည့်ပေါ့ဗျာ ပြီးရင်apply >OK ကိုကလစ်ရင်ရပါပီ အောခနလေးမသိသေး
saver အောက်ကNone ဆိုတာကနေ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေ ထားပေး
IT Learner And Sharer
C8816,C8816D Unlock Bootloader,Auto Root & Myanmar Font Installer
(C# Development Reverse Tool Kit)
C8816,C8816D တွေကို တစ်ခါထဲ မြန်မာဖောင့်,UnlockBootloader,Root
ဒီ Tools လေးကတော့Developer ဖြိုးချမ်း ရဲ့ ဖန်တီးမှုလေးဖြစ်ပါတယ်
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ROOT Softwares, ဖုန်း ROOT နည်း
၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လတုန်းက အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Screen size ၅ လက်မနဲ့ HTC One (M8) ကို Root လုပ်ရတာ အရင် HTC ဖုန်းတွေလောက်မလွယ်တဲ့အတွက် Android Exploit Hacker တွေအတော်ခေါင်းခဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် HTC ဖုန်း hacker တစ်ဦးက HTC One (M8) ကိုအလွယ်တကူ root လုပ်နိုင်စေမယ့် Exploit ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး WeakSauce ဆိုတဲ့ app ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီ WeakSauce ဆိုတဲ့ app ကိုအသုံးပြုပြီး HTC ဖုန်းကို အလွယ်တကူ root လုပ်နိုင်မှာပါ။ Bootloader လည်း unlock လုပ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ လုပ်နည်းကိုတော့ အောက်က link မှာဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Facebook ကဲ့သို့ လူမှုကွန်ယက်ကို မြန်မာပြည်က မြန်မာဘာသာဖြစ် စတင်ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ MySocial for Andriod
MySocial ဆိုတာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့၊ သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်ဖို့ နဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းများအချင်းချင်း နှီးနှောဖို့ရန် အကောင်းဆုံးနေရာလေးဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာနှင့် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော မြန်မာ့ လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် ပို့စ်များကိုအခမဲ့ရေးသားနိုင်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း
ပိုစ့်များ ပုံများ၏အောက်တွင် အကြောင်းပြန်နိုင်ခြင်း၊ ဝေမျှနိုင်ခြင်း၊ ကြိုက်ကြောင်း ပြသနိုင်ခြင်း
MySocial မှသူငယ်ချင်းများနှင့် ချက်တင်ပြောနိုင်ခြင်း
Easy HTC Bootloader Unlock [ No Need Unlock Code ]
Htc ဖုန်းတွေအတွက် One Click Unlock Bootloader
Tool လေးပါ ဘာ Code မှာတောင်းစရာမလိုပါဘူး ဗျား
Download link : Easy HTC Bootloader Unlock.exe
From Mobile Mother
Rar, Zip Password Recovery Pro 4.54.48 with Serial
ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အသစ်လေးတွေ့ လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လို ရုပ်မချောတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့။သူရဲ့ ထူးခြားပုံက စရိုက်တည်းက တစ်ခါတည်းပြင်ဆင်ပြီးရိုက်လို့ ရတယ်ဗျ။အပေါ်က ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီးကြိုက်ရင်ဒေါင်းသွားလိုက်နော်။ https://www.dropbox.com/s/1ccaf6xiabfclap/PerfectShot%20v1.0%20Shared%20by%20ngathant.apk?mhttp://mobilecrazyman.blogspot.com/
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ကွန်ပြူတာ Software, ဖုန်း ROOT နည်း, ဖုန်းနည်းပညာများ
(1) Huawei U8818 ကို root လုပ်ဖို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့recovery super click rar file ကို download ဆွဲပါ။
(2)ဖုန်းကို fastboot ထဲဝင်ရပါမယ်။fastboot ထဲဝင်နည်းကတော့ ဖုန်းရဲ့volume down key+့ power key ကို 2seconds or 3seconds လောက်တပြိုင်ထဲနှိပ်ထားရပါမယ်။ဖုန်းမှာ logo ပေါ်ပြီးရပ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းလေးထားလိုက်ပါ။
(3)ဲပြီးရင်ဖုန်းကို usb ကြိုးနဲ့computer တွင်ချိတ်လိုက်ပါ။
(4)download ဆွဲထားသော် zip file ကို computer ပေါ်တွင် extract လုပ်ပါ။extract လုပ်ထားသော် file ထဲက window.bat file ကို run လိုက်ပါ။root လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
(5)usb တွဲထားတာကို ဖြုတ်လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဖုန်းကို battery ဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်လိုက်ပါ။
(6)ဖုန်းရဲ့volume up key+power key ကို တွဲ နှိပ်ထားပါ။ recovery mode ထဲကို ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင် volume up or volume down ခလုပ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ပေါ်လာသော်စာတွေထဲက reboot system now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဖုန်း power ပြန်တပ်လာရင် မိမိရဲ့application ထဲကို ကြည့်လိုက်ပါ su logoနဲ့ super user့ပေါ်နေတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။root လုပ်ခြင်း ပြီးပါပြီ။
root လုပ်ဖို့recovery super click rar file
မှတ်ချက်။ ။zip file ကို extract လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။double click နှိပ်ပြီး run လို့ မရပါ။အောင်မြင်ကြပါစေ။
Download Smart GApps Installer
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Android ဖုန်းဆော့ဝဲ, ROOT Softwares
အခုလက်တလော အသုံးများနေတဲ့ Huawei Y600-U00 လေးကို
Root ဖောက်ပြီး Gapps သွင်းချင်သူများအတွက်ပါ။
ပထမဆုံး BaiduRoot.apk ကိုသွင်းပြီး Root ဖောက်ပါ။
ပြီးရင် SuperSu နှင့် BusyBox ကိုသွင်းပါ။
ထို့နောက်တွင် ကိုကျော်စွာသွင်ရဲ့ Smart Gapps Installer.apk ကိုသွင်းပါ။
Samsung ဖုန်းများ THL Firmware ကိုမတင်ပဲ မြန်မာစာကို Browser မှလွဲ၍ ("ရပင်း"တွေအထဲမဝင်နေ၇င် )
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Android ဖုန်းဆော့ဝဲ, ဖုန်းနည်းပညာများ
Samsung ဖုန်းများ THL Firmware ကိုမတင်ပဲ မြန်မာစာကို Browser မှလွဲ၍
ကျန်နေရာများတွင် THL Firmware တင်ထားသလိုမျိုးမှန်ပါမယ် ခင်ဗျား ("ရပင်း"တွေအထဲမဝင်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျ)
Samsung ရဲ့ ZawgyiOne2008.ttf ကိုပဲသုံးပါတယ်ခင်ဗျ
ပထမဦးဆုံး ဖုန်းကို Root လုပ်ပါ ကျွန်တော် S4 9505 LTE နဲ့စမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျ
ZawgyiOne2008.ttf ကို system/font ထဲထည့်ပါ Permission ချိန်းပါ
system/etc ထဲက fallback_fonts.xml နဲ့ fallback_fonts_sbrowser.xml ထဲတွင် ZawgyiOne2008.ttf ကို Declare လုပ်ပါ (Declare လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုမသိပါက ကျွန်တော်တင်ထားပေးသော zip ဖိုင်ထဲမှ fallback_fonts.xml ကို Notepad++ နဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါ သဘောပေါက်မှာပါခင်ဗျ) xml နှစ်ခုလုံးကို
ဖုန်းကို Restart လုပ်ပါ ပြန်တက်လာရင်
မြန်မာ keyboard တစ်ခုခုနဲ့ မြန်မာစာစမ်းကြည့်ပါ ("ကျော်" ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်ပါ "ရပင်း" ကအထဲဝင်နေပါလိမ့်မယ်) ရပါပြီ မြန်မာစာကတော့မြင်ရပါပြီ ဆက်ရအောင်ပါ
system/csc/ ထဲက others.xml ကို
RootExplorer သုံးပြီးတော့ Open in text editor ဆိုပြီးဖွင့်ပါ ဒီနေရာမှာအထူးသတိထားပါခင်ဗျ
ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုစာလုံးပေါင်းလုံးဝမမှားစေပဲနဲ့ Declare လုပ်ပေးပါ
ဖုန်းမှ menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Save and Exit လုပ်ပေးပါ Permission ချိန်းပြီးကြောင်းသေချာအောင်ထပ်စစ်ပါ ဖုန်းကို Restart လုပ်ပါ ပြန်တက်လာရင် မြန်မာစာ "ကျော်" ဆိုပြီးစမ်းရိုက်ကြည့်ပါ
(RootExplorer သုံးပြီး Declare မလုပ်တတ်ရင် ကျွန်တော်ပေးထားသော zip ဖိုင်ထဲမှသက်ဆိုင်ရာဖိုင်များကို သူ့နေရာနဲ့သူကူးထည့်ပြီး Permission ချိန်းပေးပါခင်ဗျ ကျွန်တော့် zip ဖိုင်က S4 9505 LTE ကိုစမ်းထားတာပါခင်ဗျ)(တစ်ခြား Samsung ဖုန်းတွေကိုစမ်းချင်ရင်လည်းမိမိဖုန်းထဲကသက်ဆိုင်ရာ xml ဖိုင်တွေကို PC ပေါ်ကူးပြီး Notepad++ နဲ့ Declare လုပ်ပြီး Save ပါ Save ပြီးသား xml ဖိုင်တွေကိုသူ့နေရာသူပြန်ကူးထည့်ပါ Permission ချိန်းပေးပါ)
Download Link 1 (0r) Download Link 2
Post by ဘိုဘိုစံ
Facebook ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဖုန်းနဲ့ Verify လုပ်နည်း
facebook ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဖုန်းနဲ့ Verify လုပ်ပါမယ်
facebook lock ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်2Steup ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်
မိမိတို့ဖုန်းလေးနဲ့ Verify ကုတ်တောင်းထားတော့ပိုပြီးစိတ်ချရတာပေါ့
CDMA နံပတ်တွေတော့အနော်စမ်းကြည့်တာရဘူး :D
အခုအရင်ဆုံး firefox မှာ Add-on သွင်းရပါမယ်
အပေါ်ကလင့်ကနေ Add-on install လုပ်ပါ
ပီးရင် firefox ဒေါင့်စွန်းလေးမှာ ပျားပုံစံကောင်လေးပေါ်လာပါမယ်
facebook lock ကြရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊2Steup ခံရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
firefox ဒေါင့်နားက firebug ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ
အောက်နားမှ Script code တွေနဲ့ Box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အဲဒီက Search Box မှာ
ပီးရင်2လို့ပြထားနဲ့နေရာက sms နေရာမှာ voice လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာ V အကြီးအသေးမှားရင်အဆင်မပြေပါဘူး
ပီးရင်တော့ ဒေါင့်နားက ၀ိုင်းထားတဲ့ power ကိုပိတ်လိုက်ပါ
ပီးရင်ဖုန်းနံပတ်ထည့်ပီး continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အဲကပြောတဲ့ code ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
Huawei C8816D အတွက် Theme Font လေးပါ 4.3 အတွက် အဆင်ပြေအောင်
ီDjjoe Man ရဲ့ဖောင့် သုံးထားပါတယ် ။
Posted by Saw Zayar Dragonknight
သင့်ဖုန်းမှာ ဖုန်းဆင်းကတ် နှစ်ခု ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် Viber အကောင့်နှစ်ခုကို ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲလ် လေးလိုပါလိမ့်မယ် လိုအပ်မယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
သင့် ဖုန်းဟာ google account ၀င်ထားပြီး google play ၀င်ရတယ်ဆိုရင်
သင့်ဖုန်းကို သင့်ကွန်ပျူတာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား device တစ်ခုခုကနေ ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်
browser တစ်ခုခုကနေ အောက်ပါလင့်ကိုသွားလိုက်ပါ
သင့်ဖုန်းထဲဝင်ထားတဲ့ google account နဲ့sign in ၀င်လိုက်ပါ ပုံပါအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ...
ညဏ်ရှိသလို သုံနိုင်ပါတယ် Google ရဲ့ service တစ်ခုပေါ့ဗျာ...